Olee otú iji tọghata DTS ka AC3 Easily na oké Ogo
> Resource> Video> Olee otú iji tọghata DTS ka AC3
Ọ bụ nnọọ akwa ahụmahụ na-egwu HD MKV nkiri na a nnukwu TV ihuenyo. Otú ọ dị, i nwere ike na-egwu gị MKV faịlụ gị TV, dị ka Samsung ma ọ bụ LG smart TV. Nke ahụ bụ n'ihi gị MKV faịlụ ndị na DTS audio, nke na-adịghị otú dakọtara na LG na Samsung TV wdg a ikpe dị ka nke a, i nwere iji tọghata gị MKV faịlụ na DTS ọdịyo na MKV faịlụ na AC3 ọdịyo.
Iji tọghata DTS ka AC3, Wondershare Video Ntụgharị (Video Ntụgharị maka Mac) bụ mfe ụzọ maka gị. Ọ bụ ọkachamara MKV DTS ka AC3 Ntụgharị. Na ya, ị nwere ike tọghata DTS ka AC3 dị nnọọ ole na ole dị mfe clicks. Ọ na-enye gị oké mmepụta mmetụta, enweghị na-emetụta ọ bụla ọdịyo & video àgwà nke gị MKV faịlụ.
Nke a nzọụkwụ-site-nzọụkwụ nkuzi ga-egosi gị otú tọghata MKV DTS ka AC3 on Windows n'elu ikpo okwu. N'ihi na Mac uers, na-arụ ọrụ bụ n'ụzọ yiri nke ahụ, otú i nwere ike na-ezo aka a nkuzi n'okpuru.
1 Import MKV DTS faịlụ ka a DTS ka AC3 Ntụgharị
Mbubata gị MKV DTS faịlụ a usoro, ị nwere ike pịa "Tinye Files" button na-agagharị na kọmputa gị ma họrọ lekwasịrị faịlụ. Ọzọ ụzọ dị mfe bụ kpọmkwem ịdọrọ na dobe gị MKV DTS faịlụ site na gị na kọmputa na-a ngwa si window. Rịba ama na a na ngwa na-akwado ogbe akakabarede.
Ebe ọ bụ na ị dị nnọọ mkpa ịgbanwe DTS ọdịyo na AC3 audio, ị ka nwere ike ịzọpụta gị video faịlụ na MKV usoro. Ya mere, ebe, họrọ MKV dị ka mmepụta format ma setịpụrụ AC3 dị ka ya audio codec.
Pịa format na akara ngosi na mmepụta Format ebi ndụ nke window, na mgbe ahụ na-aga "usoro"> "Video"> "MKV". Ke akpatre, ihe kacha mkpa bụ na pịa Setting bọtịnụ na ala ka Audio Encoder dị ka AC-3.
Cheta na: Nke a na-eji ngwa ozugbo awade ọrụ na-kachasị usoro maka Samsung TV, LG TV, Sony TV na Panasonic TV. Ọ bụrụ na ị chọrọ igwu MKV faịlụ ndị a na TV na, na ị na-gwara kpọmkwem họrọ kachasị usoro maka gị TV. Ya mere, ị dị nnọọ na-aga "Ngwaọrụ"> "TV na" kama, wee họrọ gị TV ụdị.
3 Dezie gị videos (Nhọrọ)
Dezie gị videos ọ bụrụ na mkpa, dị ka ubi, ewepụtụ, bugharia, tinye mmetụta, watermark, na sobtaitel wdg Nanị pịa "Dezie" bọtịnụ na video item mmanya na-edezi ngwá ọrụ ị chọrọ.
4 tọghata DTS ka AC3
Pịa "tọghata" button na-amalite DTS ka AC3 akakabarede. A ngwa ga-rụchaa video akakabarede na nkeji. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ị nwere ike ka a na ngwa na-agba ọsọ na ndabere, otú i nwere ike ime ndị ọzọ ọrụ na-enweghị ihe ndọpụ uche.
Mgbe ọ mere, ị nwere ike nweta mmepụta faịlụ site na ịpị Open nchekwa bọtịnụ na ala nke a na window. Ugbu a, dị nnọọ nyefee faịlụ gị TV maka playback.
Olee otú iji tọghata FLV ka DV
Ịzụta Cheap Blu-ray Movies Online